Udaikot-5BHK✦Isihombiso seLifa leMveli✦BKFST✦Bonfire@Udaipur
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguAnkita
UAnkita unezimvo eziyi-1066 zezinye iindawo.
Ukubonelela ngeembono ezintle ze-Aravalli Range, i-Udaikot yipropati yelifa elihle e-Udaipur. Indawo yokuhlala yelifa inengca kunye nethafa onokuthi udlale kuyo imidlalo yebhodi, okanye uzipholele nje kuyo. Ngeendleko ezongezelelekileyo, unokuziphekela ukutya kwakho ekhitshini, usele iziselo ebharini, okanye wonwabele ibarbecue. Isidlo sakusasa siyancomeka!
I-Udaikot ikhethekile ngenxa yayo:
- Indawo phakathi kwendalo
-Imibono yeAravali Hills
- Ukuhonjiswa kwelifa lemveli
Sikhathalele intuthuzelo yakho ngokupheleleyo! Ukwenza oko, sibonelela:
-Inverter, AC, TV, Wi-Fi
- Isinxibo, ii-hangers, intsimbi
- Iigiza, iitawuli, izinto zangasese
- Ikhithi yezonyango
-Indawo yokupaka ekhuselekileyo ukuya kuthi ga kwiimoto ezi-2
Le yipropati elungele isitulo esinamavili.
- Kukho amagumbi okulala ama-5 ane-air-conditioning - ama-3 kumgangatho ophantsi, ama-2 kumgangatho wokuqala. Amagumbi ama-2 emhlabeni adibeneyo.
- Onke amagumbi aneebhedi ezinkulu.
- TV inikezelwa kwelinye igumbi kumgangatho wokuqala.
-Amagumbi ama-4 aneendawo zokuhlambela ezincanyathiselweyo, igumbi eli-1 kumgangatho ophantsi linegumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo.
- Kukho izindlu zokuhlambela ezi-4 eziqhotyoshelweyo kunye ne-1 yokuhlambela eqhelekileyo.
- Onke amagumbi okuhlambela anegiza, iitawuli kunye nezindlu zangasese ezisisiseko.
- Iindawo ezihlukeneyo zokugqoka zinikezelwa kwiindawo zokuhlambela eziqhotyoshelweyo.
- Igumbi lokuhlala lihlala abantu abali-10 kwaye libonelela ngeTV kunye ne-AC.
- Indawo yokutyela ihlalisa abantu abasi-8.
Kukho i-800 sq ft. lawn enendawo yokuhlala abantu ukuya kwi-12.
- Kukho idama lokuqubha elinabileyo, 20x10 ft ngobukhulu. Iindwendwe zinokufikelela echibini ukusuka ngo-7 AM ukuya ku-7 PM.
- Kukho iitesi ezinezihlalo.
- Iindwendwe zinokungena simahla ekhitshini ukulungiselela iti, ikofu, ii-noodles ezikhawulezayo kunye nokufudumeza ukutya kwakhona. Nangona kunjalo, ukulungiselela ukutya okucokisekileyo, intlawulo ye-R.1000 ngosuku iya kutsalwa.
- Ikhitshi lixhotyiswe nge-microwave, isitovu segesi, ifriji, isicoci samanzi kunye netoaster.
- Izitya kunye nezinto zokucheba ziyafumaneka.
- Ukupheka kunye nokusetyenziswa kokutya okungekho mifuno kuvunyelwe.
- Isidlo sakusasa esiluncedo siyanikezelwa.
-Kuzo zonke ezinye izidlo, iindwendwe zinokuodola okanye zitye kwindawo zokutyela ezikufuphi njengeJai Jogmaya Restaurant, iDevi Restaurant, iMann Mandir Restaurant kunye neKuwar Kaleva Restaurant.
ISixeko saseLakes, i-Udaipur sisithsaba selizwe laseRajasthan, eboshwe yi-Aravalli Hills ukusuka macala onke. Ngobuninzi bobuhle bendalo obuphindaphindwa yimigudu yabantu, i-Udaipur yenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zinomtsalane kakhulu ukutyelela. Njengomnye weyona mimangaliso ibalaseleyo yezakhiwo zaseRajasthan, isixeko sase-Udaipur kufuneka sityelelwe abo bathanda ukubona. Ke, ngelixa ukonwabela ukuhlala kwakho okutofotofo kwesi sakhiwo, nazi iindawo ezimbalwa ezikufutshane kunye nemisebenzi esiyicebisayo ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke ngakumbi.
-Chitha ixesha loxolo kufutshane neLake Pichola
-Yiva ubungangamsha beBhotwe leSixeko
-Jonga ukuzola kweFateh Sagar Lake
- Hlaziya imbali kwiLake Garden Palace
- Ngqina ubungcwele baseNathdwara
Umbuki zindwendwe ngu- Ankita
Izimvo eziyi-1 070
Umamkeli akakho kwipropati kodwa uhlala efikeleleka ngokufowuna okanye ngomyalezo.Umnakekeli oqeqeshiweyo nonoxanduva ukhona kwipropathi ukusombulula naziphi na iinkxalabo kwaye akuncede ube nokuhlala ngokugqibeleleyo.